के तपाईले सपनामा सर्प देख्नुभयो ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो…. – Paluwa Khabar
के तपाईले सपनामा सर्प देख्नुभयो ? तपाईमा अब यी चकित हुने ६ कुराको लक्षण हो….
मंग्सिर ९, २०७७ मंगलबार 51
एजेन्सी । हामीले सपनामा के देख्न सक्ने कसैको नियन्त्रणमा छैन । सपना एउटा यस्तो सत्य हो जुन सबैका लागि सामान्य छ र हरेक व्यक्तिले जीवनमा कहिलेकाहीं सपना अवश्य देख्छ । आज हामी कुरा गर्दैछौं सर्पको सपनाको बारेमा । हो, सपनामा सर्प देखेर डराउनु सामान्य छ । यसलाई लिएर हाम्रो समाजमा थुप्रै प्रकारका विश्वासहरू छन् । धार्मिक ग्रंथहरूमा, सर्पको सपना लिएर धेरै कुराहरू भनिएको छ। आउँनुहोस जानौं सपना सँग सर्पको के सम्बन्ध हुन्छ ।।।।।
१, यौ’न जीवन र सर्प
केही अध्यनहरुमा यो पनि भनिएको छ कि तपाईले सपनामा सर्प देख्नु र तपाईको यौ’न जीवनको निकैं नजिकैको सम्बन्ध रहेको छ । यदि सपनामा सर्प तपाईंको ओछ्यानमा देखिन्छ वा सर्पसँग जोडिएको अन्य पुरात देख्नुभयो भने त्यसको सिधै असर तपाईंको यौ’न ऊ’र्जासँग हुन्छ । साथै सपनामा स’र्प देख्नाले तपाई आफ्नो यौ’न सा’थिका बारेमा धेरै कुराहरु जान्न सकनुहुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
२, सर्प र समृद्धि
पुरानो समयमा, सर्पलाई सद्धृदिसँग जोडेर हेर्ने गरिएको थिँयो । यस विश्वासको अनुसार, यदि तपाईंले आफ्नो सपनामा सर्प देख्नुभयो भने, तपाईंले चाँडै सफलता र पैसा पाउँदै हुनुहुन्छ । तपाईले थालेको काममा तपाई सफलताको नजिक हुनुहुनछ । यर्सथ तपाईंले सफलताको मार्गमा आउँने सबै बाधाहरु पार गर्नुभयो ।
३, सर्प र चेतावनी
सपनामा सर्पको बारेमा अर्को धारणा यो हो कि तपाईंको वरिपरि कसैले त्यस्ता व्यक्ति छ, जसलाई तपाईले अत्याधिक मात्रामा विश्वास गर्नुहुँदैन । दोस्रो तथ्य के हो भने तपाईं कुनै पनि सत्यलाई बेवास्ता गरेर गलत मार्गमा अगाडि बढ्दै हुदैँन, यसलाई पनि जान्नुहोस्।
४, सर्प र आध्यात्मिकता
पूर्वी देशहरूमा प्रचलित विश्वासका अनुसार, सपनामा सर्प आउँनु भनेको तपाईंको कुन्डलिनी जागृत हुनु हो । तपाईंको शरीरले नयाँ प्रकारको ऊर्जा पाउँदैछ, जसमा तपाईंले सफलताको मुकुट प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सपनामा सर्प हुनुको अर्थ आध्यात्मिक उपलब्धिहरु संग पनि जोडिएको छ।
५, सपनामा सर्पले ड’स्नु
यदि सपनामा तपाईलाई सर्पले ड’स्यो वा तपाईलाई नि’ल्ने कोशिस गर्दैछ भने,यसको अर्थ हुन्छ तपाईंले कुनै पनि संघर्ष वा जीवनमा चलिरहेको परिस्थितिहरूलाई यथास्थितमा छोड्नु पर्छ । भविष्यमा यो स्थिति एक बोझ हुन सक्छ किनभने,यसको साथ बलियो रूपमा संलग्न हुनु तपाईको लागि बोझ भन्दा अरु केही हुँदैन ।
६, सर्प र मन पर्ने वा नपर्ने
वातावरणको अनुसार तपाईं जहाँ बस्नुहुन्छ, सपनामा सर्प आउनुको अर्थ फरक हुन सक्छ। तर सर्पको बारेमा तपाईं कसरी सोच्नुहुन्छ ? चाहे तपाईं तिनीहरूसँग डराउनु हुन्छ वा हुँदैन, तपाईंको सपना पनि यस कुरामा निर्भर गर्दछ । किनकी यदि तपाईं सर्पदेखि डराउँनुहुन्छ भने, सपनामा सर्प देखेर तपाईंको अनुभव कुनै सर्प पालेर बसेको मानिसको भन्दा फरक हुन सक्छ । यो भनिएको छ, हामी अक्सर हाम्रो सपनाहरु मा त्यहि चीजहरू देख्छौं, जसको हामी वरिपरि छौं वा त्यसका बारेमा हामी अधिक सोच्न सक्छौं।
Prevआर्यघाटकी सपना जसले कोरोनाकालमा पनि सड्नबाट बचाइन् शवहरूलाई
Nextओली संग मिल्न तयार छौ भन्दै विप्लवले ल्याए यस्ता प्रस्ताव !
त्यो बिहान जब तेजबहादुरलाई भतिज लोकबहादुरले देखे त्यसपछि
पदिय भागबण्डामा नेकपाकाे रडाकाे
मैले फेरी जिते भने विश्व चकित हुने गरी काम गर्छु : केपी ओली
ट्रायल सेन्टर अब निजिलाई
हातका यी ७ रेखा हेरेरै आफ्नो भाग्य आफै थाहा पाउन सकिन्छ, कतै तपाईको हातमा पनि त्यस्तै रेखा त छैन?
हातका यी ७ रेखा हेरेरै आफ्नो भाग्य आफै थाहा पाउन सकिन्छ, कतै तपाईको हातमा ओअनि त्यस्रै रेखा त छैन?
२.	एक्कासि काठमाडौंमा के भयो यस्तो राता रात सबैले किन उपत्यका छोडदै छन ? (49)
३.	जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउदै आएका १८ राउटेको मृ’त्यु (47)
४.	लोकबहादुर कार्कीका बाउ र भाई, खड्गबहादुरका बाबुछोरा मिलेर तेजबहादुरको परिवारको ह,’त्या (46)
५.	संखुवासभा ह,त्या का,ण्डमा ९ जना प,क्राउ परे जसमध्य ४ जना निर्दोष ठहरिए,हेर्नुस् ह,त्यारा र निर्दोष अनुहार (भिडियो हेर्नुस्) (46)
७.	आज राती १२ बजे देखि लागू हुने गरी NTC ले ल्यायो अहिले सम्मकै सस्तो डाटा अफर ! (41)
८.	अन्तिम दिन भद्रकालीमा धर्ती माताले देखाइन कालीको राक्षसी रुप, प्रहरीकै अगाडी गरिन यस्तो ताण्डब ! (41)